घनश्याम भुसालले उठाए जबजमाथि तीन प्रश्न – Nepal Views
घनश्याम भुसालले उठाए जबजमाथि तीन प्रश्न
ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि तीन बुँदे फरक मत राख्दै उपमहासचिव भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद परिभाषित नगरीकन अघि बढ्नै नसकिने तर्कसमेत गरे।
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ ९जबज०माथि प्रश्न उठाएका छन्। ललितपुरको च्यासलमा रहेको तुलसीलाल स्मृति भवनमा आइतबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले जबजमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि तीन बुँदे फरक मत राख्दै उपमहासचिव भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद परिभाषित नगरीकन अघि बढ्नै नसकिने तर्कसमेत गरे।
उनले भने ‘‘जनताको बहुदलीय जनवाद के हो ? भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेको छैनौँ अहिलेसम्म। त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा परिभाषित गरेका छैनौँ, आधिकारिक रूपले त्यसलाई व्याख्या गरेका छैनौँ। यस विषयमा पनि हामी यसरी लामो समयसम्म जान सक्दैनौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको यत्रो कुरा गरेका छौँ। तर त्यो के हो ? भन्ने कुरा नै नभनेर पनि जान सकिन्छ? तसर्थ यो पनि हामीले परिपूर्ण गराऔँ भन्ने मेरो कुरा हो।’’
उपमहासचिव भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद ‘‘आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेजस्तो’ हुन नहुने टिप्पणीसमेत गरे। उनले थपे ‘‘हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गरेका छौँ। त्यो आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेजस्तो जसले जे बुझ्यो, त्यही भयो। त्यसलाई परिभाषित गरेका छैनौँ। जनताको बहुदलीय जनवादले के गर्छ ? साम्राज्यवादको विरोध गर्छ। जनताको समर्थन गर्छ, जनताको पक्ष लिन्छ। महिलाको पक्ष लिन्छ। युवाको पक्ष लिन्छ, यस्ता अनेकन कुरा भन्न सकिन्छ। तर स्वयम् जनताको बहुदलीय जनवाद के हो ? भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेका छैनौँ।’’
उपमहासचिव भुसालले कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठुलो धक्का खानुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफूहरूभित्रै रहेको कमजोरीबारे अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश नभएको भन्दै त्यसमा पनि फरक मत रहेको बताए।
२०७८ असोज १० गते २१:३७